Iqela eligqibeleleyo: Ukuhlaziywa kwe-Golf Hybrid
IQela Eligqibeleleyo laqala ngo-2002, linikezwa yinkampani esekelwe ngumntu wesiganeko seGalati uKessler. Kwaye uKessler wayebonakaliswe kwiindawo ezingenasiphelo ezijikelezayo kakhulu kwiGantic Channel ngo-2002 no-2003.
U-Kessler akasabambisene nenkampani, kwaye akunakwenzeka ukubona iiklabhu ezipapashwe namhlanje. Kodwa i-brand isasaza njenge "I-Perfect Club Golf Collection," kwaye yenza uluhlu lweeklabhu ezivela kubashayeli ukuya kwii-chippers, ngaphezu kweklasi yokuqala yokutshintsha i-iron.
Le ngqungquthela yasePherfect Perfect yayiyinye yeeklasi zegalufu ze-golf ze-hybride ezithengiswa kakhulu, nangona kamva kwakukho ukubizwa ngokuba yi "club utility." Yasebenzisa i-shaft emfutshane ukukunceda ukunika i-golfer ephezulu yokulawula, kunye nezinto ezininzi zokuphucula umdlalo kuquka ukukhutshwa okubalulekileyo.
Leyo Club yasekuqaleni igqibeleleyo ifanelwe indawo yayo kwimbali njengenye yeenkampani zokuqala zegolbhi eziziwayo ngokuthe ngqo kwaye zithengiswa ngempumelelo.
Njengoko kuphawuliwe, uphawu lwePlafe Club olulungileyo namhlanje luquka ezinye iindidi zeeklabhu, kwaye unokubona abo kwi -perfectclub.com.
Nanku ukuhlolwa kwethu kwasekuqaleni kweQela eliPhezulu eliPhezulu, elipapashwe ngokusesikweni (okokuqala kuninzi) ngoJan 19, 2003.
Iqela eliQala eliPheleleyo: iiNgcebiso, iiNgqununu, kunye neeNkcazo
I-shaft encinci eyenzelwe ukulawula ukudubula.
Ubuso obuhle, ukulinganisela kufaka ibhola phezulu emoyeni.
Umgama kunye ne-loft zivelisa amahlumela amade ukuba umhlaba ulula.
Umzekelo ovivinywe uziva unzima kakhulu.
Ukucima i-turnoff yabanye abadlali abangcono.
Ubude be-shaft engama-intshi engama-39 bufutshane kunamahlathi amaninzi, amaqela amancedo kunye neeninzi ezininzi.
Ubuso beQela eliPhezulu liphezulu kwiidridi ezingama-21.
Isiseko esiphantsi sogonyamelo senza i- clubhead ilula ukuzivelela ngexesha lokuguqula kwaye inceda ibhola ibhubhe.
Intloko ekhuselayo inceda abaninzi abadlali abazonwabisa ngokulwa kwabo.
I-sole edityanisiweyo, ephakanyisiwe "V", inceda ukuba igqitywe ngotshani kwaye igweme ukumba ehlabathini okanye kwi-turf.
Iqela eligqibeleleyo liza ngakwesokunene nangesobunxele, amadoda kunye nabasetyhini, izitye okanye iimpawu ze-graphite shafted.
Imodeli yamadoda ibonisa i-Lamkin grip, imodeli yabasetyhini i-Winn grip.
Ukuphonononga Iqela Eligqibeleleyo
NgoJanuwari 19, 2003 - Ukuba ufumene ubuninzi beSiteshi seGalofu kungekudala, mhlawumbi uye wabamba ezinye zeentengiso ezinobungqina obengumqhubi wesigalo seGaloli u-Peter Kessler enqwenela iqela elipheleleyo.
UKessler ungumongameli wenkampani kwaye unesandla ekuhambeni kwexesha lokuphuhlisa kweqela. Ukholelwa ukuba inkampani yakha i-mousetrap engcono ngokudibanisa i-clubhead eyenza i- angle ephezulu yokuqalisa kunye nomgama ongaphezulu kunye ne-shaft enceda ukudala ulawulo olubanzi.
I-shaft ye-Perfect Club yiyona nto uKessler ebona njengothixo.
"Abantu abaphela kuphela abanokuthi bajonge i-shaft ende enokulula ... ngabadlali abangama-50 abasemgangathweni kwihlabathi," kusho uKessler. "(Ba) banejubane lokuzula kunye ne-swing path to take advantage of longer, shaft light.
IQela Eligqibeleleyo libonisa i-shaft mfutshane kunanoma yimuphi umbutho wezithuthi kwiimarike.
Enyanisweni, ngoxa iKessler uthi umgama ovelisweyo kufuneka ulingane neyakho insimbi engama-3 okanye 4, uthi iglawu kufuneka idlalwe njengoko uza kudlala i-iron-8.
"Siye sakha iqela elikuvumela ukuba ulidlale ngokungathi liyimpuma elifutshane, phakathi kwesimo sakho, kodwa ufumana uhlobo olude lomgama kunye nokuphakama," kusho uKessler.
Into ebalulekileyo yemfundo kuthi ukuxelela abantu ukuba bayidlale apho ivakalelwa khona ngokusemgangathweni, ephakathi (ngesimo), kwaye uye phambili kwaye uyitshitshise kuyo njengokuba yayisigxina okanye i-8-iron . "
Xa unomthwalo ophezulu kwi-clubhead, umdlali uvakalelwa yi-clubhead kulo lonke ixesha. Ngomda ophakanyisiweyo "V" ophantsi kwe-clubhead, iqela lilula ngokukhawuleza kwaye liyeke ukuloba kwi-turf okanye isanti. I-loft inceda ukufumana ibhola lomoya, ngelixa i-shaft e mfutshane inikela umdlali ibhotshi engcono kwi-swing efanelekileyo.
Yiloo ngcamango. Yintoni umphumo?
Sasibetha ibhola ngokufanelekileyo kwaye sinobuchule ngokusemini ngosuku esinenkathazo kunye namanye amaqela. Impendulo yodwa kuthi yinto yokuba iqela liziva likhulu kakhulu - kodwa umzekelo ovivinywayo wawunomthi we-Real Temper steel shaft. Iifomfa zeGraphite ziyafumaneka kwaye ziqinisekile ukuba ziyimodeli ethandwa kakhulu.
Ukusebenza kweQela eliPhezulu libonakaliswe kakuhle, nangona kunjalo, ngumdlali webhula owayebethela iqela kunye nathi. Ubetha amabhola amabhola angama-20 okanye anjalo ngaphandle kwe-fairway bunker , kunye ne-18 kubo babedlala ngokugqibeleleyo.
Ilishumi elinesibhozo ngaphandle kwe-20 ayenzi iChristian Perfect epheleleyo, kodwa yenza ukuba kucaciswe ukuba iqela liza kuthathwa ngokungathí sina.
Umxholo ophantsi : Iqela eligqibeleleyo aligqibekanga, kodwa akukho galulo legalufa lingaba njalo. Oko Iqela Eligqibeleleyo liqela elihle kakhulu eliqhubayo njengoko lipapashwa - lifanelekile ukukhangela.
10 Amazwi malunga neebhabhra
Iindlela ezi-3 zokuPhelela ngokuPhepha uMlambo okanye uMlambo
Amalungelo okuVota kuMvelaphi wabaFundi
Iimidlalo ze-NFL kunye neRekhodi engapheliyo